M. Holland Anochengetedza Kubatana Kuwedzera 3D Kudhinda Zvishandiso Sarudzo
Resin mutengesi M. Holland akazivisa kudyidzana kutsva uye zvigadzirwa kune yayo iri kukura portfolio. Iyo Illinois-based kambani yakabatana nevatatu vatsva ekuwedzera ekugadzira (AM) zvigadzirwa vatengesi kuti vawedzere yavo 3D yekudhinda chigadzirwa chinopa ne50%. Iwo matsva anobata neAsingaperi Chinyorwa Mhinduro, Ki ...
Kudhinda kwe3D kunozvarwa kuunza iyo nyowani, ichigonesa dhizaini uye kugadzira kuti kuitike mune itsva fashoni. Vanyori zvishoma nezvishoma vari kuburitsa kugadzirwa kweiyi tekinoroji-ne-rukoko tekinoroji uye kuita kwakasiyana kwezvinhu zve 3D zvinodhinda kuti uwane zvigadzirwa zvehunyanzvi. 1. Chinja zvisingaite kuita m ...
Chii chinonzi ST-PLA?
PLA (Polylactic Acid) ndiyo yakanyanya kuwanda ye3D yekudhinda zvinhu nekuti iri nyore kushandisa uye inogadzirwa kubva kuvandudzwa zviwanikwa uye nekudaro, inogona kuora. PLA mapurasitiki kana polylactic acid chinhu chemuriwo-wakavakirwa epurasitiki zvinhu, izvo zvinowanzo shandisa chibage senge mbishi. ....
Nei PLA iri nyore kupwanya?
Mushure memwedzi mitanhatu kana kudarika, PLA Firimendi inova inopwanya uye inoputsa nyore. Izvi zvinoita kuti filament isakodzere kushandiswa. Mukucherechedza kwedu takaona zvichiitika zvisinei nedunhu / mamiriro ekunze kana kugadzirwa kwako. Inguva chete iyo inogona kungwarira zvichibva pamamiriro epadenga enzvimbo kune mafirita ...